Abalawuli baseChina bathi cha emakhathuni 'angenampilo'
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » I-China Breaking News » Abalawuli baseChina bathi cha emakhathuni 'angenampilo'
Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • I-China Breaking News • Amasiko • Izindaba zikaHulumeni • Human Rights • Izindaba • Abantu • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje
Abaphathi baseChina banxuse abahlinzeki bezinsizakalo ze-inthanethi ukuthi basungule iziteshi nezindawo ezinempilo ekusetshenzisweni kwezingane nentsha, benze eminye imizamo ekulawulweni kokuqukethwe nasekucwengweni kohlelo, futhi basize ekwakheni indawo yezokuxhumana elungele ukukhula kwabantu abasha.
Opopayi baseChina abaqukethe iziza noma izithombe zodlame, igazi, inhlamba noma izithombe zocansi.
Abahlinzeki bezinsizakalo ze-Intanethi ukuthuthukisa iziteshi nezindawo ezinempilo ekusetshenzisweni kwezingane nentsha.
Abahlinzeka ngemisebenzi ye-Intanethi banxuse ukuthi basize ukwakha i-cyberpace evumayo ekukhuleni kwabantu abasha.
INational Radio and Television Administration yaseChina izwakalise ukulahlwa ngokuphelele kwamakhathuni 'aqukethe iziza noma izithombe zodlame, igazi, inhlamba noma izithombe zocansi'.
Izimpawu ezilenga ngaphakathi kweCostco zazisa amakhasimende ukuthi aphelelwe ngumsebenzi ngoMashi 2, 2020, eCypress, CA. (Isithombe nguJeff Gritchen, Orange County Register / SCNG)
Abahlinzeka ngemisebenzi ye-inthanethi yezinhlelo zewebhu ezilalelwayo nezibukelwayo bayakhuthazwa ukuba bakhe, bangenise futhi basakaze opopayi abanamanani amahle futhi bathuthukise ubuhle beqiniso, okuhle nokuhle, isiphathimandla sezokusakaza saseChina sisho kwiwebhusayithi yayo.
Abaphathi banxuse abahlinzeki bezinsizakalo ze-intanethi ukuthi basungule iziteshi nezindawo ezinempilo ekusetshenzisweni kwezingane nentsha, benze eminye imizamo ekulawulweni kokuqukethwe nasekucwengweni kohlelo, futhi basize ekwakheni indawo yezokuxhumana elungele ukukhula kwabantu abasha.
The I-National Radio neThelevishini Administration, phambilini obengumbuso Wezokuphathwa Kwemisakazo, Amafilimu, kanye neThelevishini kanye ne-State Administration of Press, Publication, Radio, Film and Television, yisikhungo esiphezulu sezinga lezinkonzo ngqo ngaphansi koMkhandlu Wombuso WeRiphabhuliki Yabantu China.
Umsebenzi wawo omkhulu ukuphatha nokuphatha izinkampani zikahulumeni ezisebenza ezimbonini zethelevishini nezomsakazo.
INational Radio and Television Administration ilawula ngqo amabhizinisi kahulumeni ezingeni likazwelonke njengeChina Central Television, China National Radio, kanye neChina Radio International, kanye namanye ama-studio ama-movie nethelevishini nezinye izinhlangano ezingezona ezamabhizinisi.